Tani waa soo bandhigida bedelka Apple Watch | Wararka IPhone
Inkasta oo inta badan isticmaaleyaashu ay wali sugayaan inay soo galaan Apple Watch, haddana waxaa jira dad horeyba, sabab kasta ha noqotee, codsaday a beddelka smartwatch tufaaxa qaniinay. In Apple Watch uu yahay aaladda "shakhsi ahaaneedQofna shaki kama gelinayo Apple waana wax iska cad in dadka Cupertino ay tixgeliyeen faahfaahin kasta oo ugu dambeysay si markaa khibrada isticmaaleyaashu ay gaar u tahay bilowgii.
Waxaan haynaa caddeyn tan ku jirta baakadda saacadda. Dhammaan saddexda xaaladood (Sport, Watch and Edition), the Apple Watch waxay u timid sidii ay si toos ah uga timid dukaanka dahabkaQaabka Ciyaaraha wuxuu ku yimaadaa sanduuq dheereeya, kaas oo na xusuusin kara baakadaha uu ku jiro shaashad, iyo moodooyinka Watch iyo Edition ee ku jira sanduuq laba jibbaaran, taas oo na xusuusinaysa nooc ka mid ah jijinno ama hilqado
Foolxumida baakadaha ayaa sidoo kale ku jirta beddelka Apple Watch. Sida aad ku arki karto sawirada Max weisel, saacada cusub ayaa gudaha timid sanduuq laba jibbaaran, oo ay ku xardhan tahay atchDaawo xardhan iyo xarkaha oo aan la soo uruurin.
Apple waxay kor u qaadaysaa Apple Watch sida dhar mooddo, taas oo warbaahinta inteeda badani xaqiijiso inay tahay guul. Farqiga u dhexeeya waxa kuwa Cupertino noo soo jeedinaya iyo tartankiisa ayaa ah in Apple ay ku guuleysatay inay abuurto dhar leh naqshad aad u taxaddar badan. Mid kale "ku dhufo", oo waxaan tan ku ridi doonaa calaamado oraah, waa in sidoo kale loo soo bandhigaa sida shey raaxo. 38mm Sport oo ah nooca ugu jaban ee qiimihiisu yahay 349 XNUMX, moodellada badankood (kuwa ku dar Watch iyo Daabacaad) waxay leeyihiin qiime aad u sarreeya, gaaraya illaa ,17.000 XNUMX nooca ugu sarreeya noocyada Nooca. Dhibaatadu waxay tahay, oo ay tahay iyada oo aan la sheegin, inay tahay qiimo aad u sarreeya dadka caadiga ah, kuwaas oo ku qasbanaan doona inay sameeyaan dadaal dheeri ah haddii aan dooneyno inaan helno smartwatch ee tufaaxa qaniinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Tani waa soo bandhigida bedelka Apple Watch
Valvaro Hernán Aragon dijo
Bedelaad ?? Jeceshahay markaad gaariga u qaaddo aqoon isweydaarsiga?
Jawaab Álvaro Hernán Aragón
Maya, waa 'dib loo cusbooneysiiyay' inay ku siiyaan marka aad ku beddelato AppleCare, ama ay lacag bixiyaan haddii aad ka baxsan tahay damaanadda.
1x24 iPad News Podcast: iPad Pro, Windows 10, Apple Watch iyo inbadan